Onye nchebe ahụike - Wanhe Industry na Trade Co., Ltd.
Ọ dị mfe na echekwa iji wụnye n'elu ntọala dị iche iche. Ogo nke ntọala adịghị elu. Ọ naghị atụ egwu nke ịkụ, enweghị nchekasị nke ọnya na mkpebi siri ike. Ihe eji eme ahihia ahihia bu ihe enyi na gburugburu ebe obibi, a na-ewu ngwaahịa a emechara, a na-edozi oge iwu ya na mkpụmkpụ, àgwà dị mfe nchịkwa, na nnabata dị mfe.
Nzube zuru ezu nke ogige egwuregwu artificial na-ama mma, ọnụego ojiji dị elu, ndụ nwere ike iru ihe karịrị afọ 8, ọ na-adịgide adịgide ma na-eguzogide ọgwụ, enwere ike iji ya mee ihe ogologo ụbọchị niile.
Ahịhịa artificial dị mfe ilekọta, ụgwọ mmezi dị ala, ọ dị mkpa ka a sachaa ya na mmiri iji wepu unyi, ma nwee njirimara nke adịghị mma na enweghị nrụrụ.
Arfik wuru nwere njiri mara nke ujo absorption, enweghị mkpọtụ, nchekwa na adịghị emerụ ahụ, elasticity, na ezi ire ọkụ retardation. O kwesịrị ekwesị maka iji ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ugbu a bụ ebe kachasị mma maka ọzụzụ, mmemme, na asọmpi.
Igwe artificial na-anabata echiche nke nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi iji zere mmerụ egwuregwu. Ọ na-enye ike ikuku zuru oke iji belata mmebi nke enwere ike ibute site na izugbe siri ike n'ụkwụ, nke mere na ị nweghị onwe gị pụọ na nchegbu dị iche iche kpatara site na ebe a.
Caromi Ahịhịa Grass, Wuru Lawn, Bọọlụ Turf Grass, Ru Egwuregwu Golf Grass, Ogige Astro Turf, Nchikota ahihia ahihia ahihia ala,